Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Emhlanganweni wabaholi bebandla engake ngawuhambela, ilungu elisha elalisanda kuqokwa lathi: “Anginaso isimo esanele, ngizwa sengathi akungifanele ukwenza lo msebenzi. Ngizizwa ngicindezelwa yizinto eziningi, okwenza ngingakwazi ukulala izinsuku eziningana ngokulandelana….” Ngaleso sikhathi, bengithwele imithwalo ekufuneni kwami uNkulunkulu, ngakho ngakhuluma naye: “Wonke umsebenzi wenziwe uNkulunkulu; umuntu umane ahlanganyele nje kancane. Uma sizizwa sithwele kanzima, kaningi ukuza phambi kukaNkulunkulu nokuncika kuNkulunkulu ngokuqinisekile kuzosenza sibone ukuba namandla amakhulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Kuhle ukuzizwa sinomthwalo emsebenzini wethu. Kodwa uma lowo mthwalo uba yinhlupheko, lokho kuzoba yingqinamba, futhi kuzoholela ebubini nasekungaqondini uNkulunkulu.” Ngaphansi kokuqondiswa uNkulunkulu, ngizwe izingxoxo zami zikhanya ngokukhethekile. Udade wabona naye ukuthi usesimweni lapho uNkulunkulu angabanga khona nendawo enhliziyweni yakhe, nokuthi ubezenzela ngokwakhe kunokuthembela kuNkulunkulu, ngalokho wayithola indlela yokungena. Bengithokoze kakhulu ngaleso sikhathi ngoba bengicabanga ukuthi ngingayixazulula inkinga kadade, ngikhombise ukuthi nginesibonakaliso soqobo ngeqiniso.
Ngemva kwezinyanga ezimbili, ibandla langabela ukuba ngihlanganise izincwadi ezithile. Ngisaqala ukwenza lo msebenzi, ngoba ngangingaziqondi izimiso eziqondene nawo, angikwazanga ukunqanda ukuwela esimweni esiphambene nokuba nenxushunxushu lapho ngibhekene nawo wonke amabhuku okwakudingeka ngiwahlanganise: Ngangingaqondi lutho, kanti futhi ngangingafanele ukuqeda lo msebenzi kuphela kodwa nganikezwa nomsebenzi wokuthola ukusilela emabhukwini. Kwakuwukungisebenzisa ngokweqile lokhu! Ngezwa nje nginengcindezi enkulu futhi ngangakwazi ukwehlisa umoya, futhi ngangingakwazi ukuthi ngangingathembela kanjani kuNkulunkulu. Ngangikhathazekile ngangakwazi nokulala izinsuku ezintathu ngokulandelana. Ngangishaqeke kakhulu esimweni engangibhekene naso. Ngenkathi ngisiza loya mholi omusha ukuxazulula inkinga yakhe, ngazizwa sengathi ngisiqondisisa kahle lesi sibonakaliso seqiniso. Kepha kwenziwa yini ukuthi uma ngiwele enkingeni enje manje, ngingazi ukuthi ngibhekane kanjani nayo? Ngiye phambi kukaNkulunkulu ngididekile ngisambathekile nginjalo.
Kamuva, ngabona amazwi kaNkulunkulu kwethi “Umsebenzi Nokungena (2)”: “Lapho umuntu esebenza futhi ekhuluma, noma phakathi nomkhuleko womuntu wokuzinikela kwakhe komoya, iqiniso liyohlala obala kubo. Nokho ngokoqobo, lokho umuntu akubonayo kuwukuphela kokukhanya okulethwa uMoya oNgcwele (ngokwemvelo, lokhu kuvame ukubambisana nomuntu) hhayi isimo sangempela somuntu. Ngemva kwesikhathi umuntu adlula kuso ebunzimeni nokuvivinywa okuthile, isiqu sangempela somuntu siyacaca ezimweni ezinjalo. … Kungemva kweziwombe eziningi kuphela zalezo zinto lapho iningi lalabo abavusiwe emoyeni wabo beyobona khona ukuthi bebengekho esimweni sangempela, kodwa ukukhanya kwesikhashana koMoya oNgcwele, futhi umuntu wakuthola ukukhanya. Lapho uMoya oNgcwele ukhanyisela umuntu ukuze aqonde iqiniso, lokho uvamise ukukwenza ngendlela ecacile nengagwegwesi, ngaphandle kokuchaza ukuthi izinto zenzeka kanjani noma ukuthi ziya kuphi. Lokho kusho ukuthi, akahlanganisi ubunzima bomuntu kulesi sambulo, kunalokho ulembula ngokuqondile iqiniso. Lapho umuntu ehlangabezana nobunzima ekungeneni, umuntu ube eseba nokukhanya kukaMoya oNgcwele, futhi lokhu kuba yinto umuntu abhekana nayo ngokoqobo” (Izwi Livela Lisenyameni). Njengoba bengicabanga ngalesi siqeshana, ngaqonda ukuthi: Iqiniso engiliqondile ngenkathi ngisiza udade ukuxazulula inkinga yakhe, livele ekukhanyiselweni nguNkulunkulu. Kungenxa yokusebenzisana ngaleso sikhathi okwenza ukuba ngithole ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele. Kodwa kwakungesona isimo sami ngempela futhi besingakhombisi ukuthi ngithole leso sibonakaliso seqiniso. UMoya oNgcwele ungikhanyisele ukuba ngiqonde iqiniso ngaleso sikhathi ngoba bekubalulekile emsebenzini wami, futhi ngokusebenzisana wangisiza ukuxazulula izinkinga nobunzima emsebenzini wami. Kodwa ngaphambi kokuthola ulwazi lwangempela kulolu daba, isimo sami sasisesincane. Manje uma ngihlangabezana nobunzima ekungeneni, kungokuhlanganyela ekukhanyiselweni uMoya oNgcwele lapho lapho iqiniso liba khona ukuphila kwami.
Ngaphansi kokukhanyiselwa nokuqondiswa yizwi likaNkulunkulu, ngehlisa umoya ngabheka futhi ngathembela kuNkulunkulu, futhi ngokuqhathanisa ngokucophelela nokucabangisisa izimiso mayelana nokuhlanganisa amabhuku, ngathola ukukhanyiselwa nokuqondiswa nguNkulunkulu ngingazelele, okwangenza ukuthi kancane kancane ngibone ngale kwezinkinga zamabhuku, futhi ngizuze ukucaciselwa kangconywana ekucabangeni kwami njengoba ngangilungisa amabhuku Ngabuye ngakwazi ukusuka kancane kancane ekubeni nombono ophambene nasekungaqondini kwami.
Ngibonga uNkulunkulu. Ngalolu lwazi ngikwazile ukubona kahle isimo sami soqobo, ngagwema ukuchezuka ekuqondeni kwami. Kungenze ngabona ukuthi ukuqonda kwami iqiniso okukhanyiselwe uMoya oNgcwele bekungasho nginalesi sibonakaliso seqiniso ngokoqobo. Ukusukela manje, ngizimisele kakhulu ukuletha ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele empilweni yangempela ukwenza nokungena, ukuze lawa maqiniso abe iqiniso lokuphila kwami ngempela.
Okwedlule: Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?
Okulandelayo: Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza
UXiaowei Edolobheni laseShanghai Esikhathi esithile esadlula, yize noma njalo ngangithola intshisekelo kanye nomhlomulo lapho udade...
USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade...
UWenwen Edolobheni LaseChangchun, Esifundazweni SaseJilin Ngokombono wami, njalo ngangicabanga ukuthi uma ukwenza izinto kwangaphandle...